फिचर::Best News Experience from Nepal
बोडि बेच्न बजार पुगेका कार्यपालिका सदस्य नहकुल विक , विगत केहि वर्ष देखि शिवराज नगरपालिका २ मा कृषि पेशा गर्दै आएका छन । तस्विर: माधव बेल्वासे (कपिलवस्तु ) ...
गुल्मी । गुल्मी जिल्लाका १० वटा गाउँपालिका र २ वटा नगरपालिका सहित १२ वटा स्थानिय तह मध्ये मुसिकोट नगरपालिकाले अगाडी सारेको विकाशको गति र जनताको समृद्धिका कार्यक्रमलाई हेर्दा अन्य स्थानका जनताको भन्दा पहिला मुसिकोट नगरवासीको मुहार छिट्टै फेरिने संकेत देखा परेको छ । स्थानिय तहको निर्वाचन अघि सम्म सदरमुकाम तम्घासबाट राताडाँडा ईन्द्रगौंडा हुँदै सो नगरपालिकाको केन्द्र वामीटक्सार पुग्न झण्डै ३ घण्टा समय लाग्दथ्यो । वर्षायामको समयमा त जाममा परेर दिनैभरी...
दाङ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१० को गौरीगाउँ ताललाई पर्यटनको केन्द्र बनाउन थालिएको छ । एकै स्थानमा सात ताल रहे पनि प्रचार-प्रसारमा ओझेलमा परेको भन्दै उक्त ताललाई पर्यटनको केन्द्र बनाउन शुरु गरिएको हो । ताल संरक्षण समितिका अध्यक्ष झग्गुप्रसाद बुढाथोकीले करीब आठ बिघा क्षेत्रमा फैलिएको सो क्षेत्रलाई थप आकर्षण बनाउन पहिलो चरणमा तालको बीच भागमा मन्दिर निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए । “आठ बिघा क्षेत्रफलमा एकै स्थानमा सात ताल छन, यी ताल...
प्यूठान । बस्तीको शिरमा अग्लो डाँडो, डाडाँको काखमा प्राकृतिक रुपमै बनेको दह । त्यसो त ‘चारैतिर डाँडै डाँडा छन । घना सल्लेरी वनले घेरिएको प्राकृतिक दहको दृष्य हेर्दा मन खुसीले फुरुङ्ग हुने गर्छ । सरुमारानीको चुलीबाट बाह्रै महिना हिम शृङ्खला देखि तराई मधेश र भारतका समथर फाँट र प्राकृतिक भू–वनोट हेर्न सकिन्छ । फागुन चैतमा फुल्ने लालिगुराँसले सिंगारिने दृश्यहरुको सौन्दर्य बयान गर्नु भन्दा पुगेरै अनुभव गर्न मज्जा हुन्छ । सरुमारानी...
बुटवल । महेन्द्र माध्यामिक विद्यालय वामीटक्सार गुल्मीको ६० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गरिएको हिरक महोत्सव तथा श्रीमद्भागवत धन धान्याचल सप्ताह ज्ञानमहायज्ञ आज देखि सुरु भएको छ । महायज्ञको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उद्घाटन गर्ने भन्दै ब्यापक प्रचार गरिदै आए पनि प्रधानमन्त्रीको समय नहुँदै अहिले केहि बेर पछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरुक्षा मन्त्री गोकर्णराज विष्टले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । अहिले कलशयात्रा चलिरेको छ । ...
महोत्सव विकृतिको रुपमा विकास हुंदैछ : जो सुकैले पनि केही काम गर्छ भने त्यस्को उदेश्य के हो प्रष्ट हुनु पर्दछ । अहिले प्यूठानमा महोत्सवको नारा जे जसरी दिएको छ यो साँच्चिको महोत्सव हो त ? गम्भिर समिक्षाको विषय छ । महोत्सवको नारा दिइन्छ तर, सरोकारवालाहरुमा कुनै सरोकार छैन । छलफल छैन व्यक्ति पिच्छे, समुह पिच्छे महोत्सव भनेर यस्ता गतिविधि गर्न थाल्ने हो भने अब प्यूठानवासीको क्रयशक्तिले धान्ने कि नधान्ने ? अहिले...
रोल्पा । रोल्पामा दुईवटा महोत्सव सञ्चालन भइरहेका छन । कृृषि, उद्योग, व्यापार, संस्कृति र पर्यटनको विस्तार दीगो विकास समृद्धिको आधार महोत्सवको नारा रहेको छ । दोस्रो रोल्पा महोत्सव सञ्चालन भइरहको छ । भने यस्तै नारामा चतुर्भुज मान्डवी कृषि पर्यटन तथा साँकृतिक महोत्सव सञ्चालन भइरहेको छ । महोत्सवको लक्ष्य पर्यटन क्षेत्रको प्रचार-प्रसार गर्ने रहेको छ । रोल्पा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक रुपले पर्यटन क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना बोकेको जिल्ला हो । स्वर्गद्वारी महाप्रभुको...
जुन गाडीमा भविश्य देखियो-उसैले लियो ज्यान
बुटवल । सवारी साधनको सुविधा उपभोग संगै जुन कोही मानिसको जिवन पलपल खतरामा छ र कति बेला के हुने हो भन्ने कुरा अनिश्चित छ । त्यही अनिश्चित जिवनको यात्रा गर्न श्रीमतिको हातले दिएको खान खाएर हिडेका थिए शुक्रबार बिहान गुल्मी वामी तिम्लेचौर गाउँका ३० बर्षिय ठाकुर सापकोटा । त्यही यात्रा र श्रीमतिको हातले दिएको खान नै क्षण भर मै उनको अन्तिम खान र यात्रा बन्न पुग्यो । सानै देखि गाउँ...
विकटका अपाङ्ग-कष्टकर जीवन
दाङ । राजपुर गाउँपालिका–५ महतिनिया खोला निवासी जुनपुरा रोकामगर ५ बर्षदेखि हिँडडुल गर्न सक्दैनन् । साविक रोल्पा उवा–३ सिन्दुरखर्कमा बस्दा ज्वरोका कारण एक महिना थलिएकी जुनपुरा त्यसपछि हिड्न सकेकी छैनन् । त्यसपछिको उनको जीवन सुतेरै बित्ने गरेको छ । घरदेखि बाहिरभित्र गर्न चार हात खुट्टाले टेकेर हिड्ने गरेपनि घरदेखि बाहिर जान नसक्ने अवस्था रहेको जुनपुराकी दिदी कल्पना रोका बताउँ छिन । ‘पहिले तँ बहिनी राम्री थिइ,हिडडुल गर्थी आमालाई आफै पालेकी...
सहरमा हराएको फिरन्ते बस्ती
दिपक के.सी. कपिलवस्तु । कपिलवस्तुको निकै व्यस्त बजार चन्द्रौटा । जिल्ला कै उत्कृट व्यापारी केन्द्र बन्दै गइरहेको सहर । पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्र्तगत शिवराज नगरपालिका वडा नं. ५ मा पर्ने चन्द्रौटा बजार । पछिल्लो समय व्यापारिक केन्द्रको रुपमा विकास भइरहेको छ । तिव्र रुपमा भइरहेको मानविय वस्ती विस्तारले यहाँको जनघनत्व पनि क्रमिक रुपमा बढ्दै गइरहेको छ । २०६४ यता क्रमिक रुपमा बजार विस्तार भइरहेको यस चन्द्रौटा बजारमा छिमेकी जिल्लाहरु रोल्पा,रुकुम, दाङ,प्यूठान,...